दसैं भनेर हरेक छाक मासु मात्रै खाने नगर्नुहोस्, देखिन सक्छन् यस्ता समस्या दसैं भनेर हरेक छाक मासु मात्रै खाने नगर्नुहोस्, देखिन सक्छन् यस्ता समस्या Canada Nepal
दसैं भनेर हरेक छाक मासु मात्रै खाने नगर्नुहोस्, देखिन सक्छन् यस्ता समस्या
दसैं आयो, खाउला पिउला... भनेर बालबालिका बढी रमाउने गर्छन । दसैंमा विभिन्न किसिमका परिकारहरू घरपरिवार, आफन्त तथा साथीसँग बसेर खाने चलन छ । पर्वअनुसार खानेकुरा पनि नेपाली सँस्कृतिमा आफ्नै प्रचलन छ । तिहारमा सेलरोटी, संक्रान्तिमा तरुल, असार १५ मा दही चिउरा, साउन १५ मा खीर, जनैपूर्णिमामा क्वाँटी खाइन्छ । यसैगरी दसैंमा विभिन्न परिकार पकाइए पनि मासुलाई मुख्य मानिन्छ । वा भनौ दसैंलाई मासुको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ । मासु नखाए त के दसैं भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ, तर दसैंमा साकाहार भोजनको पनि आफ्नै महत्व छ ।
शाकाहारी भोजनमा रेसादार तथा हरियो सागसब्जी हुने हुँदा यसले कब्जियतबाट मुक्त गराउनुका साथै शरीरलाई अति आवश्यक सुक्ष्म पोषणतत्व, क्याल्सियम, प्रोटिन प्रशस्त उपलब्ध गराउँछ ।न्युज कारखाना
आश्विन २८, २०७८ बिहिवार २०:११:३७ बजे : प्रकाशित
हङकङमा पनि देखियो कोभिडको नयाँ भेरियन्ट, यी देशबाट यात्रा गर्नेलाई २१ दिन क्वारेन्टिन
हङकङ - हङकङमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिका र क्यानडाबाट गएका दुई जनामा नयाँ भेरियन्ट देखिएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको ।
उनीहरु दुबै जना होटलमा आईसोलेसनमा थिए । उनीहरूमध्ये क्यानडेली नागरिक भने लामो समयदेखि सोही होटलमा बस्दै आएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका व्यक्तिबाट उनमा नयाँ भेरियन्ट सरेको हुने अनुमान गरिएको छ ।
परीक्षणका क्रममा उनीहरु दुबैमा नाम दिइएको भेरियन्ट देखिएको थियो । डब्लूएचओले सुरुमा B.1.1.529 नाम दिइएको भेरियन्टका कारण दक्षिण अफ्रिकाका सबै राज्यमा संक्रमण बढी रहेको पाइएको जनाएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले ओमिक्रोनबाट संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको जनाउँदै विभिन्न देशहरूले दक्षिण अफ्रिका क्षेत्रबाट आउने यात्रुहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । डब्लूचएओले ओमिक्रोनलाई ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ घोषणा गरेको छ ।
हङकङ सरकारले दक्षिण अफ्रिका, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका अन्य देश भएर आउने हवाई यात्रुलाई होटेलमा अनिवार्य २१ दिन क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ ।
मंसिर १२, २०७८ आइतवार १०:३६:२४ बजे : प्रकाशित
ओमिक्रोन भेरियन्टः सम्पूर्ण सीमा बन्द गर्ने इजरायलको घोषणा
जेरुसेलम - कोभिडको नयाँ भेरियन्ट फैलिरहेका बेला इजरायलले आफ्नो देश प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण सीमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्वभर नयाँ भेरियन्टको त्रास बढिरहेका बेला आफ्ना सम्पूर्ण सीमा बन्द गर्ने इजरायल पहिलो देश हो । सरकारले दुई सातासम्म सीमा बन्द गर्ने प्रधानमन्त्री नाफताली बेन्नेटले बताए ।
‘नयाँ भेरियन्ट झन्डै सबै देश फैलिएको छ,’ गृहमन्त्री आयलेट शकेदले भने, ‘भाइरसविरुद्ध खोप कति हदसम्म प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बारेमा मूल्यांकन आवश्यक छ ।’एजेन्सी
मंसिर १२, २०७८ आइतवार ११:५३:१० बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन १ सय ५८ जना कोरोना संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप १ सय ५८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ८ हजार ९ सय १८ वटा परीक्षण गर्दा १ सय ५८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख २० हजार ८ सय ७८ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९५ हजार ४ सय ७२ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ४२ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ८ लाख २ हजार ३ सय ८९ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ६ हजार ९ सय ६६ जना रहेका छन्।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप २ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ५ सय २३ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंसिर १२, २०७८ आइतवार १८:२२:२४ बजे : प्रकाशित
वर्षमान पुनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं - नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ ।
गत शुक्रबार थप उपचारको लागि बैंककबाट चीन पुगेका पुनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिइन् । उनको चीनको थर्ड पिपुल्स हस्पिटल अफ सेन्जेनमा उपचार भइरहेको छ ।
शरीरमा देखिएको जण्डिस बढेपछि उनी केहि समयअघि बैंकक गई त्यहाँको समितिभेज अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । तर स्वास्थ्यमा कम सुधार देखिएपछि उनलाई चीन लगिएको थियो ।
मंसिर १३, २०७८ सोमवार १२:०६:४९ बजे : प्रकाशित
# ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन
कोभिडको नयाँ भेरियन्टविरुद्ध नयाँ खोप आवश्यक - मोडेर्ना इन्क
न्युयोर्क - मोडेर्ना इन्कका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत पाउल बर्टनले अहिले विकसित भइरहेका कोभिड खोप नयाँ भेरियन्टका लागि प्रभावकारी नहुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । आगामी सन् २०२२ सम्ममा परिमार्जन गरी नयाँ खोप विकसित गरिने उनले बताएका छन् । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भाइरसको विश्वव्यापी त्रास बढिरहेका बेला उनको सो भनाई आएको हो ।
‘नयाँ भेरियन्टको भाइरसविरुद्ध अहिले प्रयोगमा आएका खोप प्रभावकारी हुन्छन वा हुन्नन् भन्ने बारेमा एक दुई सातामा नै थाहा हुन्छ,’ बर्टनले भने । उनले नयाँ भेरियन्टको भाइरसलाई नयाँ खोप आवश्यक पर्न सक्ने र आगामी वर्षको सुरुमा सर्वत्र उपलब्ध गरिने बताए । ‘हामीले चाँडै खोप तयार गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
सक्दो सावधानी अप्नाउनु र अहिले प्रयोगमा आइरहेका खोप सक्दो प्रयोग गर्नाले नयाँ भेरियन्टबाट बच्न सकिने उनले सुझाव दिए । ‘कोभिडलाई नजरअन्दाज गरेर खोप नलगाएका व्यक्तिले तत्काल खोप लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो खतरनाक भाइरस भएकोले बेलैमा सावधानी अप्नाउनु पर्छ ।’
ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएपछि अमेरिकाकाे म्यासाचुसेट्समा रहेको बायोटेक कम्पनीले बिहीबार सयौं कर्मचारी परिचालन गरेको थियो । एजेन्सी
मंसिर १३, २०७८ सोमवार १५:०९:५९ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन २ सय ५९ जना कोरोना संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप २ सय ५९ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ९ हजार ८ सय ८८ वटा परीक्षण गर्दा २ सय ५९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख २१ हजार १ सय २१ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९५ हजार ४ सय ८८ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ६४ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ८ लाख २ हजार ६ सय ५३ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ६ हजार ९ सय ४४ जना रहेका छन्।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप १ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ५ सय २४ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंसिर १३, २०७८ सोमवार १७:५९:२८ बजे : प्रकाशित